Rugby - Lalao olimpika :: Hanoman-tena any Tonizia ny Makis vehivavy • AoRaha
Rugby – Lalao olimpika Hanoman-tena any Tonizia ny Makis vehivavy
Ny fifaninanana tsapa miandry ny ekipam-pirenena malagasy na Makis sokajy vehivavy amin’ny baolina lavalava, no hanamafisana ny fanazaran-tena etsy amin’ny kianja Andohatapenaka. Hiatrika lalao fanomanan-tena any Tonizia izy ireo, amin’ity volana avrily ity, mialoha ny fifanintsanana hikatsahana ny tapakila hahafahana mandray anjara amin’ ny Lalao Olimpika, any Japana, amin’ny 26 ka hatramin’ny 31 jolay 2021.
“Efa vonona ara-batana sy ara-tsaina ireo Makis vehivavy. Hiainga hihazo an’i Tonizia ny delegasiona malagasy, amin’ ny 26 avrily, ary hiverina antanindrazana amin’ny 9 mey 2021, raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany. Roa amby roapolo mirahavavy ireo mpilalao mivondrona ankehitriny. Mety hisy ihany koa ny fiomanana hatao any Japana, toy ny natao tamin’ny taona 2018”, hoy Rakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby. Firenena telo no hifampitsapa amin’i Madagasikara: Afrika Atsimo, Kenya ary Tonizia.
Voalahatra fa any Monaco (Frantsa) no hanaovana ireo lalao fifanintsanana ho an’ ireo firenena roa ambin’ny folo hiady toerana amin’ny Lalao Olimpika. Ny kianja Stade Louis II no hampiantrano an’ireo fihaonana, amin’ ny 19 sy ny 20 jona 2021, araka ny fandaharam-potoana.
Ekipa irika amby roapolo amin’ireo efatra amby roapolo no efa nahazo ny tapakila, hatreto. Toerana roa sisa no hiadiana ho an’ny sokajy vehivavy, ary hifanintsanan’i Madagasikara, Arzantina, Kôlômbia, Frantsa, Hong-Kong, Jamaika, Kazakstan, Meksika, Papoazy Ginea Vaovao, Rosia, Samoa ary Tonizia.
Fahafatesana ankizy teny Ivato Mandà raharaham-pihavanana ny fianakavian’ny maty
Fiainana ny Karemy :: Mandiniha tena rehefa handray Komonio
Fahafatesana mpanakanto :: Nodimandry i Ndriana Ramamonjy
Fisamborana misesisesy Misy mikasa hamono ny Filohan’ny Repoblika